Fanandramana amin'ny foara faha-Canton faha-127
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-08
Voakasiky ny toe-javatra nisy ny valan'aretina, notontosaina tamin'ny Internet ary nifarana tanteraka ny tsenambarotra Canton faha-127. Miara-mipetraka ny fotoana sy ny fanamby amin'ny Canton Fair an-tserasera, izay fitsapana ho an'ireo orinasam-pandraharahana iraisam-pirenena sy mpamokatra. Mandray anjara mavitrika ny vondrona Haorui ...
Karazan-seza fidiovana inona no tianao?
MDF (Medium-Density Fiberboard) dia vokatra vita vita amin'ny hazo izay manery ny fibres hazo ho amin'ny tabilao fisaka eo ambanin'ny mari-pana sy ny tsindry ambony, avy eo hokapaina ho endrika noforonina. Na sary hoso-doko tokana na rakotry ny patter haingon-trano ...
Nanapa-kevitra ny minisiteran'ny varotra PRC fa hatao amin'ny 15 hatramin'ny 24 jona 2020 ny foibe faha-Canton faha-127.
China Fair and Export Fair ("Canton Fair" na "The Fair"), izay hotontosaina ny 15 ka hatramin'ny 24 Jona, dia manasa mpividy 400000 manerantany hanatrika ny fampirantiana faha 127 sy voalohany an-tserasera. Amin'ny alàlan'ny sehatra nomerika, Canton Fair dia hampiroborobo bebe kokoa ny famerenana amin'ny laoniny ny ...